Alaotra-Mangoro : mila hamafisina ny fanaraha-maso | NewsMada
Alaotra-Mangoro : mila hamafisina ny fanaraha-maso
Faritra fahefatra « mihiboka » Alaotra-Mangoro, taorian’ny fitomboan’ny isan’ny mponina ao Moramanga mitondra ny tsimokaretina Covid 19. Ankoatry ny « sakana ara-pahasalamana » ao Beforona sy Marozevo amin’ny RN2 sy ny ao Ranofotsy, 30km atsimon’Ambatondrazaka, nasiana sakana koa ao Ampitambe, sahabo ho 10 km avaratr’i Moramanga, amin’iny RN44 iny. « Mihidy tanteraka aloha izao Alaotra-Mangoro », hoy ny Governora Ramandehamanana Richard, ny 16 mey teo. Misy “sakana” avokoa any amin’ny làlana mankany amin’ireo Disitrika efatra sisa.
Olona iray avy any Toamasina mampiahiahy
Fa nisy mpiasan’ny orinasa manana antoka any Alaotra, avy any Toamasina, nafindran’ny mpampiasa azy hiasa ao Ambatondrazaka, nitondra fisehoan’aretina « mampiahiahy », nifanojo tamin’ny nahitana ilay olona voalohany voamarina fa tratry ny Coronavirus tao Moramanga. Efa nonina tao amin’ny fokontany iray eto Ambatondrazaka, nivantanany izy io vao tsikaritra. Nandray fepetra ny tompon’andraikitra ka natoka-monina izy, ary nalefa any Antananarivo ny singa anamarinana raha tratran’ity aretin-dratsy ity io marary io na tsia. Misy fihatsarana ny toe-pahasalamany”, hoy ny talem-paritry ny fahasalamana tao amin’ny Fampielezam-peo iray teto an-toerana.
Mihamaro ireo mivezivezy
Ankoatra izany, mandray ny fepetra ilaina amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny prefet-n’Ambatondrazaka. Na izany aza, tombanana ho sarotra ny hisian’ny fihibohana tanteraka. Porofon’izany io mpiasan’ny orinasa voalaza etsy ambony io. Tsikaritra koa fa mihamaro ny fiara sy ny tarehin’olona vaovao mivezivezy eto Ambatondrazaka. Azo aleha bisikileta ny mampitohy an’Anjozorobe sy Sahatavy (Analanjirofo) miditra aty Antsihanaka. Nandroso hevitra ny mpiasam-panjakana misotro ronono iray, fa tokony hanara-maso isak’ireny zana-paritra ireny ny ben’ny Tanàna, hamantatra ireo olona vahiny miditra aty Alaotra.
Rarivo sy Njaka A.